Farmaajo Iyo Xassan Sheekh Hal Meel Bay Ka Siman Yihiin. (Maqaal) - FOOLAAD MEDIA
Home » Aragtida Dadweynaha » Farmaajo Iyo Xassan Sheekh Hal Meel Bay Ka Siman Yihiin. (Maqaal)
Magacayga waxaa la yiraahdaa Diraac Xaashi oo 64 jir ah. Waxaan joogaa dalka Norwey waxaana jecleystay in aan bulshada ku baraarujiyo qodob ay ka simman yihiin Farmaajo iyo Xassan Sheekh, qodobkaasoo dhibaatadiisa xambaarsan. Shabakadda Amiirnuur waxaan idiinka rajeynayaa inaad baahisaan Maqaalkan.
Anigu maahi dadka sheekada badiya. Waxaan taabanayaa nuxurka. Xassan Sheekh Maxamuud haddaan ku horreeyo wuxuu sheegan jiray inuu yahay nin aqoon yahan ah oo dhageysta fakarka dadka sidoo kalana caburinta u arka mid xaaraan ah, waxaana uu taa badalkeeda taliska Nabad sugidda u magacaabay wiil uu adeer u yahay oo la yiraahdo Tuur Yare.
Tuur yare wuxuu qabtay dhammaan shaqooyinkii loo igmaday oo ay kamid ahaayeen inuu caburiyo saxaafadda. Wuxuu xiray dhowr idaacadood. Waxaa dartii dalka uga cararay wariyaal qaarkood halkan nala jooga. Wuxuu xiray siyaasiyiin badan kuwaasoo uu qaakood dhaawac u geystay. Wuxuu barakiciyay qoysas dhul caam ah degganaa kadibna wuxuu ku wareejiyay marwada Xassan Sheekh oo dabaqyo ka dhisatay. Intaa waxa dheer oo uu ninkaasi afka qabtay xildhibaanadii mucaaradka ahaa hadba intii uu maraasi awooda u lahaa.
Farmaajo wuxuu isna dhaxlay dariiqii xumaa ee uu jideeyay Xassan Sheekh, wuxuuna agaasimaha hey’adda Nabad sugidda ka dhigay nin ay ilmo adeero yihiin oo la yiraahdo Sakariye kaasoo waliba taariikh madow leh. Ninkan ayaa wuxuu qabtay shaqadii uu Tuur Yare u hayay Xassan Sheekh. Wuxuu caburiyay siyaasiyiin isagoo taliye-yaal hoosaadyo adeegsanaya, wuxuu sabab u noqday xarigga wariye maalmahan si aad ah loogu doodayay, wuxuu baaday ganacsatada sida aan xogta ku helayo.
FARQIGA XASSAN IYO FARMAAJO
Xassan Sheekh wuxuu ahaa nin ka baqa inuu u bareero ficillada qaar, waayo wuxuu guryo iyo ganacsiba ku leeyahay magaalada Muqdisho, laakin Farmaajo oo deegaan ku ah Mareykanka, ma jiraan wax uu u jixin jixayo maadaama aanu ganacsi iyo guryo waaweyn ku lahayn Muqdisho, danna uusan ka lahayn ku noolaanshaheeda. Laakin labadooda waa ay ka simman yihiin madiidinnimada.
TUUR YARE IYO SAKARIYE
Tuur Yare wuxuu ahaa nin ku shaqeeya ahdaafta Xassan Sheekh sidoo kalana cabsan mabaadi’da qabyaaladda la yiraahdo kadibna ay u wehliso cadaawad diineed, sidaa darteed dadka gardarrada lagu soo xiro ee Muqdisho oo u badnaa qabiilkiisa ayaa waxaa dhici jirtay in lagala xaalo ama uu in kamid ah u daayo ina adeernimo markey u cadaato in dulmi lagu haysto. Laakin Sakariye waa nin qaba cadaawad diineed sida uu ii sheegay mid kamid ah taliye ku xigeenadii NISA oo aan UK ku kulannay. SIdoo kale waa nin aanan sinnaba ugu damqanayn dadka masaakiinta ah ee xabsiyada lagu silcinayo maadaama aysan qaraabo la ahayn badidooda.
Inaad sidaan wax u cabiro waxaa igu kallifay markaan arkay DF oo ku dhisan hab qabiil iyo qurun. Run ahaantii waxaan aad uga qiirooday dhibta maanta lagu hayo bulshada. Usbuuc ka hor waxaan warbaahinta ka dhageystay Dr. Xabeeb oo sheegaya in Nabad Sugidda looga yeeray kadibna laga dalbaday inuu daweeyo dhallinyaro ku waalatay Xabsiga Madaxtooyada sidii ay u garaacayeen Malleyshiyada ka amar qaadata Sakariye iyo Fahad Yaasiin. Alle waxaan ka baryahayaa inuu Xassan Sheekh, Farmaajo iyo Eeyahoodaba ka abaal mariyo waxay bulshada kula kaceen. Ugu dambayntii Ummada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in ay noqoto mid qudha iskana diido taliye-yaasha gumaadayaasha ah ee uu hadba madaxweynihii yimaada u keensanayo.
FG: Maqaalkan Looma Tiirin Karo Shabakadda Foolaad.com. Waa Fakarka Qoraaga Isaga Ayaana Mas’uul Ka Ah Waxa Uu Qoray.